Hilibka | December 2019
Ugu Weyn Ee Hilibka
Hindiya waxay noqon kartaa koox ku jirta ururinta sarreenka
96.5 Milyan tani sarreen ah - tani waa miisaanka la qorsheeyay ee goosashada sarreen ee Hindiya. Si loo gaaro hadafkani, aagga loo qoondeeyay abuurka qamadida ayaa si weyn kor ugu kacay 31.3 milyan oo hektar, taas oo xitaa in ka badan celceliska shanta sano (30.4 milyan hektar). Hindiya waxay horey u ahaan jirtey wax soo saarka qamadida, taas oo ah sannadka 2014, markii goosashada ay ahayd 95.8 milyan oo ton.
Brazil ayaa bilaabi doonta iibinta sarreenka Ruushka
Jimcihii la soo dhaafay, ayaa waxaa ka dhacay wakiillo ka kala socday Wasaaradda Beeraha ee Ruushka iyo Wasaaradda Beeraha ee Brazil, taas oo ay dawladu iyo horukaca horumarinta iskaashiga dhinaca beeraha laga wada hadlay. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Ruushka, Brazil ayaa soo bandhigtay xiisaha ay u leedahay soo saaridda qamadida Ruushka sida ugu dhakhsaha badan dhammaan arrimaha xayawaanka la xalliyo.
Azerbaijan waxa uu kordhay dhoofinta qamriga 2016
Sanadka 2016-ka, miro-dhoofinta qamriga ee Azerbaijan waxaa lagu qiyaasey 1,6 milyan oo ton, taasoo kor u kacday 18.2% marka la barbardhigo isla tilmaamihii sanadka 2015, Guddiga Gobolka ee Jamhuuriyadda Azerbaijan ilaa Febraayo 20-keedii. Marka loo eego tirakoobyada, qiimaha guud ee sarreenka laga keeno gudaha dalka waxaa lagu qiyaasay $ 295.02 milyan (0.6% ka yar).
Ruushku wuxuu ku filan yahay maadada tayo sare leh ee waxsoosaarka rootiga.
Ruushku wuxuu ku filan yahay qiyaasaha sarreenka tayada sare leh si uu si buuxda u daboolo baahida gudaha ee warshadaha roodhida, ayuu yiri Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha ee Ruushka, Jzhangat Hatuov. Xusuusnow in sannadka 2016 Ruushka roodhida roodhida rikoodhka la ururiyey 6dii sano ee la soo dhaafay.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Hilibka 2019